पूँजीगत लाभकर विवादलाई बजेटले सम्बोधन गर्ला ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण पूँजीगत लाभकर विवादलाई बजेटले सम्बोधन गर्ला ?
on: May 24, 2019 लेख | दृष्टिकोण
पूँजीगत लाभकर विवादलाई बजेटले सम्बोधन गर्ला ?
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई शेयर बजारप्रति अनुदार भन्ने गरिएको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन खोज्ने अर्थमन्त्रीहरूको आलोचना प्रायः हुने गरेको छ । विगतमा डा.रामशरण महतलाई पनि कन्जुुस अर्थमन्त्री भनिन्थ्यो । तैपनि यस पटक अर्थमन्त्रीले शेयरबजारको मागलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शेयरबजारमा लगानीकर्ताका धेरै खाले संगठनहरू छन् र तिनले आआफ्नो लगानी रणनीति अनुसार सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । शेयरबजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै खाले लगानीकर्ता आवश्यक हुन्छन् । यी दुवैको चासोलाई सम्बोधन नगरे शेयरबजार सन्तुलित हुँदैन । शेयरबजारको स्थायित्वका लागि ठूलो परिमाणमा शेयर किनबेच गर्ने (मार्केट डिलर) को आवश्यकता हुन्छ । हुन त म्युच्युअल फन्डले यस्तै काम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो भएको पाइँदैन । डिलरहरूले गर्दा बजारमा निकै ठूलो अन्तर हुने सम्भावना कम हुन्छ । योभन्दा लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भनेको पूँजीगत लाभकरको गणनाको विषय हो ।
शेयर, बहुमूल्य धातु तथा घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको खरीद मूल्यभन्दा बढीमा विक्री हुँदा प्राप्त हुने लाभ नै पूँजीगत लाभ हो । त्यस्तो लाभमा सरकारले कर लगाउन सक्छ । शेयर किनबेचमा विसं २०५८ साउन १ देखिमात्र १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत लाभकर लगाउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयता यसको दरमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । तर, लाभकरको गणना कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ता र सरकारबीच विवाद नै हुने गरेको छ ।
सूचीकृत कम्पनीहरूको हकमा बोनस र हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरी आधारमूल्य तय गरिन्छ । यसैका आधारमा पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिन्छ । तर, बोनस वा हकप्रद शेयरको वास्तविक लागतको गणनाविधिमा अन्योल छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले आधार मूल्यकै कारण घाटामा वा यथार्थभन्दा बढी लाभकर तिर्नुपरेको गुनासो गरेको पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको पत्रको आधारमा सीडीएस एन्ड क्लियरिङले बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा शेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत मानी लाभको गणना गर्ने तयारी भएपछि लगानीकर्ताले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो ।
बोनस र हकप्रदको लागत गणना गर्न मूलतः औसत लागत, कारोबार कर, वार्षिक विवरण पेश गर्ने जस्ता विकल्पहरू छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्ता छरिएका रहेकाले तथा अन्य कारणले विभिन्न समयमा मर्ज वा प्राप्तिका शेयरमा हुने घटबढ, व्यक्तिगत लेखाप्रणालीको अभावजस्ता कारण शेयरको हिसाबकिताब राख्न र वार्षिक विवरण बुझाउन सक्दैनन् । व्यक्तिले राखेको लेखा वा गणना गरेको औसत लागत प्रमाणित गर्न पनि सकिन्न । त्यसैले सीडीएस वा नेप्सेले तोकिदिएको मापदण्डको आधारमा औसत लागत र सोही आधारमा लाभकर गणना गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ ।
अर्को, कर प्रयोजनका लागि कुन शेयरलाई आधार मान्ने भन्ने अन्योल छ । खासगरी, लगानीकर्ताले विक्री गरेको शेयरको वास्तविक लागत र लाभको हिसाब गर्न र गणना गरिएको लाभकर दुरुस्त भएको सुनिश्चित गर्न सकिने आधार स्पष्ट छैन । बोनस शेयर प्राप्त गर्न उच्च मूल्यमा बजारबाट खरीद गरिएको लागतलाई मान्ने कि बुक क्लोजपछि प्राप्त हुने बोनस शेयरको अनुपातमा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्यको आधारमा लागत गणना गर्ने ? यसबारेमा विवाद भएकाले बजेट भाषणले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यस्तै हकप्रद शेयरको हक कायम गर्न बजारबाट खरीद गर्दा तिरेको मूल्य र हकप्रदको आधारमा बुक क्लोजपछि समायोजन हुने मूल्यले सृजना हुने लागतमा पनि विवाद नै छ । त्यस्तै आईपीओ वा दोस्रो बजारबाट खरीद शेयरको समेत वास्तविक लागत र लाभ गणनाको विद्यमान प्रणाली र कटाउँदै आएको लाभकर समेत विवादित हुने सम्भावना देखिन्छ । कम्पनीको शेयरको केही कित्ता विक्री गरेको र त्यो शेयर बोनस, बजारबाट खरीद वा हकप्रदबाट प्राप्तमध्येको कुन हो ? त्यसको वास्तविक लागत कति हो ? हिसाब गर्न सामान्य लगानीकर्ताका लागि गाह्रो छ । कर बढी असुल्ने विधिभन्दा पूँजी बजारलाई बलियो बनाउनेतिर अर्थ मन्त्रालयको सोच जानु जरुरी छ । अतः लाभ करसम्बन्धी वैज्ञानिक विधि तर्जुमा गरी यो विवादलाई अन्त्य गर्न बजेट भाषणमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
वास्तवमा विवाद समाधानका लागि लाभकर गणना गर्न सफ्टवेयर नै बनाउनुपर्छ जसले, एउटै कम्पनीको अनेक लागत रहने वर्तमान प्रणालीमा सुधार गरोस्, औसत लागतका आधारमा लाभ र कर गणना गर्ने व्यवस्था गरोस् । एकीकृत सफ्टवेयरबाट आईपीओ, एफपीओ, बजारबाट, बोनस, हकप्रदको लागत कति र कहिले किनेको, कुन बेचेको भन्ने विवाद र द्विविधाबाट लगानीकर्ता र सरकारले मुक्ति पाउनेछन् ।
कारोबार र शेयरसम्बन्धी पूर्ण विवरण हुने गरी सफ्टवेयर बनाउनु आवश्यक छ । यसले औसत लागत, खुद लाभ रकम र कर गणना एवम् प्रमाणीकरण गर्न सहज हुन्छ । यसको सञ्चालन सीडीएसले गर्दा सहज हुन्छ । अहिले भएको सफ्टवेयरमा सुधार गरेर यी फिचर थप्न सकिन्छ । यस्तो आधिकारिक सफ्टवेयर भएमा लगानीकर्ताले आपूmसँग भएको शेयरको वास्तविक हिसाब राख्न पनि सजिलैसँग सक्नेछन् । विक्री निर्णय गर्न र खरीद निर्णय गर्न पनि यसले केही सहज बनाउन सक्छ ।
कट्टा गरिएको लाभकर अन्तिम हुने गरी सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । सरकारले शेयर सम्पत्ति कि वस्तु भन्ने विद्यमान कानूनी अन्योलको अन्त्य गर्नुपर्छ । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा घरजग्गाको जस्तै अन्तिम कर हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पूँजीगत लाभकरमा छूट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूँजी बजार सुधारका लागि गठित समितिले तयार पारेको ५८ बुँदालाई अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यथाशक्य लागू गर्नुपर्छ । पूँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि लगानीकर्ताले राखेका मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।